Khatar aad u sareysa: Hong Kong waxay mamnuucday dhammaan duulimaadyada rakaabka ee ka yimaada UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hong Kong » Khatar aad u sareysa: Hong Kong waxay mamnuucday dhammaan duulimaadyada rakaabka ee ka yimaada UK
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hong Kong • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Maaddaama Hong Kong ay dooneyso in ay xakameyso faafitaanka noocyada cusub ee COVID-19, mas'uuliyiinta SAR waxay ku tilmaameen Boqortooyada Midowday inay tahay "khatar aad u sareysa".
Dadka ku noolaa dalka Ingiriiska in ka badan laba saacadood ayaa laga xaddidi doonaa inay galaan duulimaadyada rakaabka ee tagaya Hong Kong.
Hong Kong waxay xaqiijisay kiiskeedii ugu horreeyay ee deegaanka Delta ee 'COVID' usbuucii hore.
Xayiraadda duulimaadyada ee Boqortooyada Midowday ayaa timid iyadoo Hong Kong ay dooneyso inay ka dabciso tallaabooyinka karantiil ee dalalka kale badankood.
Dowladda Hong Kong ayaa Isniintii shaacisay in dhammaan duulimaadyada rakaabka ee ka yimaada UK laga mamnuuci doono inay u duulaan Gobolka Khaaska ah ee Maamulka Khaaska laga bilaabo Khamiista.
As Hong Kong waxay raadineysaa inay xakameyso faafitaanka noocyada cusub ee COVID-19, mas'uuliyiinta SAR waxay ku tilmaameen Boqortooyada Midowday inay tahay "khatar aad u sareysa" sababtoo ah "dib-u-soo-kabashadii ugu dambeysay ee cudurka faafa ee UK iyo fayraska baahsan ee Delta ee halkaas ku baahsan"
Qeybinta cusub, dadka ku noolaa Boqortooyada Ingiriiska in ka badan laba saacadood ayaa laga xaddidi doonaa inay raacayaan duulimaadyada rakaabka ee tagaya Hong Kong.
Hong Kong waxay xaqiijisay kiiskeedii ugu horreeyay ee deegaanka Delta ee 'COVID' usbuucii la soo dhaafay, taasoo soo afjaraysa 16 maalmood oo xiriir ah oo eber kiisaska maxalliga ah.
Xayiraad cusub ayaa ah markii labaad oo ay dowladda Hong Kong ka mamnuucdo duulimaadyada ka yimaada UK, ka dib xayiraad la soo rogay bishii Diseembar ee la soo dhaafay.
Mamnuucidan ayaa timid iyada oo ay jirto xiisad kacsan oo udhaxeysa UK iyo Shiinaha oo salka ku haysa maamul-hoosaad Hong Kong.
Xayiraadda duulimaadka waxaa keenay siyaasad ay dajisay dowladda si looga hortago noocyada kala duwan ee coronavirus ee ku faafa Hong Kong.
Joojinta duulimaadyada rakaabka waxaa la soo rogay haddii shan ama in ka badan oo rakaab ah oo hal meel ka imanaya ay tijaabiyaan imaatinka nooc gaar ah oo loo yaqaan 'coronavirus variant', ama isbeddel fayras ku habboon muddo toddobo maalmood gudahood ah.
Mamnuuc ayaa sidoo kale la soo saarayaa haddii 10 ama in ka badan oo rakaab ah oo ka socda hal meel la xaqiijiyo inay ku dhacaan cudurka coronavirus iyada oo loo marayo tijaabooyin kasta, oo ay ku jiraan tijaabooyinka la qaaday intii lagu jiray karantiil, muddo toddoba maalmood gudahood ah
Boqortooyada Midowday (UK) waxay soo warisay in 14,876 qof laga baaray coronavirus maalintii axada, maadaama ay aragtay dhawaanahan infekshannada. Waxay xaqiijisay in ka badan afar milyan oo kiis tan iyo markii cudurku bilaabmay.
Hong Kong, oo muddo bilooyin ah ku soo rogtay karantiil 21 maalmood ah dadka ka imanaya waddamada badankood isla markaana fulisay xeerar adag oo lagu kala fogaynayo bulshada, ayaa laga soo sheegay saddex kiis oo cusub oo ah coronavirus Isniintii. Waxay xaqiijisay wadar ahaan 11,921 xaaladood tan iyo markii cudurku bilaabmay.
Xayiraadda duulimaadka ee Boqortooyada Midowday ayaa timid iyadoo Hong Kong ay doonayso inay dabciso tallaabooyinka karantiil ee badi waddammada kale, oo ay ku jiraan Maraykanka iyo Kanada.